Sida laga soo xigtay Kuo, saddexda iPhone ee 2020 waxay la jaan qaadayaan 5G | Wararka IPhone
Falanqeeyaha Apple Ming-Chi Kuo kaliya la xaqiijiyay sida laga soo xigtay MacRumors maxaa waxaan saadaalinay saaka: Saddexda iPhone-ka ee iibin doona sanadka 2020 waxay la jaan qaadi doonaan kooxda 5G.
Maalmo ka hor, Kuo wuxuu saadaaliyay in laba ka mid ah saddexda iphone ee la qorsheeyay 2020 ay la jaan qaadayaan 5G, iyadoo ay ugu wacan tahay heshiiska lala saxiixday Qualcomm, laakiin hadda wuxuu rumaysan yahay inay noqon doonaan saddexda moodel ee iswaafajin kara, si ay ula tartamaan taleefannada 5G ee Android, waxay durbaba bilaabeen inay si xishood leh uga dhex muuqdaan suuqa adduunka.
Kuo dalabkan wuxuu salka ku hayaa saddex sababood oo qasab ah:
Iibsashada aagga 5G ee shirkadda Intel, Apple hadda waxay haysataa waqti aad u fudud oo ay ku horumariso moodooyinka xawaaraha sare ku shaqeeya.
Qiimaha 5G casriga ah ee leh Android ayaa la filayaa inuu hoos u dhaco inta udhaxeysa $ 250-350. Wuxuu aaminsan yahay in mobiladaas 5G ee raqiiska ah ay la jaan qaadayaan kooxda Hoosaad-6Ghz. Tani waxay jahwareerin kartaa macaamilka, maxaa yeelay Mareykanka 5G wuxuu ku shaqeyn doonaa koox ahaan mmWave. Mar dambe ayaan sharxi doonaa farqiga u dhexeeya labadan koox.
Horumarinta wadista tiknoolajiyada 5G waxay ka faa'iideysan kartaa nidaamka dhabta ah ee deegaanka ee Apple.
Falanqeeyaha caanka ah ee Shiinaha ayaa xaqiijinaya in saddexda iPhone ee cusub ee la qorsheeyay 2020 ay la jaan qaadi doonaan labada muuqaal ee 5G band, mmWave iyo sub-6Ghz labadaba si ay u gaaraan suuqa Mareykanka, laakiin ma cada in ay sameystaan ​​moodeel jaban oo kaliya qeybta sub-6Ghz ee suuqa Shiinaha. Wuxuu ka shakisan yahay xitaa haddii la iibsado tikniyoolajiyadda 'Intel', kuwa Cupertino inay horumarin karaan laba gibil oo kala duwan.
Qorshaha labada muuqaal ee loo yaqaan '5G band'
Laba nooc oo shabakadaha 5G ah
Waxaan si kooban u sharaxi doonaa labada nooc ee shabakadaha ee laga hirgaliyay adduunka, si looga fogaado cabsida qaarkood, sida markii ay soo if baxeen taleefannadii ugu horreeyay ee 4G. In ka badan hal nin oo xariif ah ayaa si toos ah uga iibsaday Terminalkiisii ​​ugu horeeyay ee 4G si toos ah Shiinaha, qiimo aad u jaban, ka dibna wuxuu layaabay in qalabkani uusan la jaan qaadi karin 4G-ga Isbaanishka. Waxaa jira laba shabakadood oo kala duwan oo ku shaqeeya isla 5G band:
MmWave waa farsamo aad u dhakhso badan 5G in qof walbaa ka hadlayo. Waxay adeegsaneysaa koox aad u sarreysa, waxayna ku habboon tahay magaalooyin cufan. Waxay ku dabooli kartaa qalab badan xawaare sare, laakiin leh masaafo gaaban.
Waxa loogu yeero Sub-6Ghz. Waxay noqon doontaa 5G meelaha miyiga ah iyo hareeraha magaalada. Waxay isticmaashaa kooxo dhexdhexaad ah iyo kuwa hoose, oo leh xawaare aad u hooseeya, laakiin leh gacan aad u dheer oo ficil ah. Wali way ka dhakhso badan tahay shabakada 4G, laakiin aad ayuu uga gaabiyaa 5G mmWave.
Apple waxay qandaraas la gashay shirkadda Qualcomm si ay u siiso 5G gibisheeda ilaa lix sano. Sannadkan iPhone XI wuxuu sii ahaanayaa 4G oo leh modemka Intel. Saldhigyada cusub ee 2020 waxay horey u ahaan doonaan 5G, waxay u badan tahay inay daboolayaan labada muuqaal ee kor lagu sharaxay, maadaama ay noqon doonaan Qualcomm chips. Doonista Apple waa inay awood u yeelato inay soo bandhigto 5G-ga u gaarka ah ee aaladaha 2021. Ma guuleysan doonaan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Sida laga soo xigtay Kuo, saddexda iphone ee soo bixi doona 2020 waxay la jaan qaadayaan 5G
Qufulka Lockdown wuxuu furayaa Firewall Source Source-ka ugu horreeya ee furan ee loogu talagalay macruufka
CARROT Cimilada waxay heshaa wax badan oo iPad ah, isku duubnaanta iCloud iyo inbadan